IGBO DỊ MMA ENYI, HA ADỊGHỊ MMA ỌLỤLỤ – hoo!haa!!
IKESA NGWÁ NBELATA NHỊAMAHỤ ỌRỊA KORO GA-AMALITE N'ABIA STEETI
AKA AKPARALA NDỊ SOJA ZỌRỌ MBÀ ỊKPASA ỤMỤ NWANYỊ WỌRỊ ARỤ
ONYE NOLLYWOOD, ONYE ANAMBARA STEETI EBUTELA ỌRỊA KORO
ENUGWU: NDỊ BISHỌỌPỤ KWESỊRỊ IKESA NDỊ ỤKA NGWA NRI KARỊA INYE GỌỌMENTI EGO-GSAC
IGBO DỊ MMA ENYI, HA ADỊGHỊ MMA ỌLỤLỤ
Legọs: Isi edemede m a bu maka ihe onye na elekọta ọdụ ụgbọ mmiri n’ala Naijiria bụ Nigerian Ports Authority (NPA) kwuru n’abali isi nke ọnwa ọgọọst, n’afọ a bu 2019.
Nwanyị ahụ bụ Hajia Hadiza bu onye nọ n’isi oche Nigeria Port Authority ndị ọ bu ha na elekọta etu ngwa ahịa dị iche na iche si abata Naijiria site na oke osimiriri kwuru si n’Ala-Igbo agaghị enwe ọdụ ụgbọ mmiri ebe ụgbọ bu ngwa si obodo bekee ga akwusi. O nyere ihe kpatara o jiri kwuo otu ahụ. Ha bu ihe ọgụpụtara bụrụ:
Nke mbu: Ụzọ, ọ siri na Ala-Igbo enweghị ezigbo ụzọ ebe ndị nnukwu ụgbọala n’ebu ngwa ahịa ga-esi aga.
Nke abụọ: ọ siri na Ala-Igbo enweghị ọtụtụ ndị na-atubata ahịa.
Nke atọ: Oké osimiri warri, na enwere owara mmanụ ndị NNPC nke ga-eme na agaghị egwumi ya bu mmiri gbada ala ka osiri dị ugbu a. Ọ kwụrụ sikwa na Oké osimiri Calabar, na etinye nnukwu ego na ya, na gọọmenti agaghị enweta ego n’ihi na ndị mmadụ hụrụ Legọs n’anya karịsịa isi na ya atubata ahịa.
Mana ihe ndị nile bu ezigbo asi, igbo di mma enyi mana anyị adighi mma ọnụnụ. Ọ bụrụ na ile anya na ihe gbasara ntụbata ahịa na obodo a, ọ bu ndi igbo nọ n’isi ya, ha ka na ọnụọgụ. Kedu ka mmadụ ga-esi kwuo na a rụọ ọbá mmiri dị igbo nso na igbo agaghi akwado ya.
Ibia n’ala igbo, anyị nwere Nnewi otu ahịa kacha nnukwu na ihe gbasara ọgba tumtum (motorcycle), ndị nile na-atubata ahịa ebe ahụ na-esi Legọs bia gbara ya ụgbọ were lata Nnewi.
Innoson otu Nwafor igbo hụrụ igbo n’anya na-arụ ụgbọala mana Legọs ka ọ si atubata ya ihe ọ jị arụ ọrụ. Kedu ka Hadiza ga-esi ekwu na igbo agaghi akwado nke ha ma ọ bụrụ na ọbá mmiri dị Warri ma ọ bụ Calabar bido rụwa ọrụ?. Ọ bụrụ otu ọnụ ego, o nwere onye ga ahụ ebe a na-echi ọzọ gaba ebe a na-alu agwụ?
Ihe gbasara ụzọ, ọ kwa otu ụzọ ahụ ka ndị si Legọs tụbata ngwa ahịa si ebulata ya ala igbo. Tupu ya bu ngwa ahịa eruo ala igbo, ndị uweojii, ndị agha na ndị Kọstọm a nara nnukwu ego n’aka ụgbọ ala ahu nile. Ego ndi Igbo di mma ịtọ na Legọs mana odighi mma iru ala igbo. Igbo nwere ahịa dika Aba, Onitsha na Nnewi, gụnyere ndị dị na Igweocha, Asaba, Warri, Abakaliki ebe ndị a ọtụtụ ọgaranya na-atubata ahịa bi ọka nkwụ.
Ihe nwanyị a na egosiputa bu na igbo di mma i mepee obodo ndị ọzọ mana nke gọọmenti etiti ga-eme wee mepee nke anyị aburu ihe dị njọ.
Mmegide ndị Igbo n’obodo a bu Naijiria, oge eruola mgbe agbu ekere nwa ngwere eruwo ọtụtọ hoo haa. Igbo gadi mma, Igbo Amaka
Mazi Chukwudi Okeke dere nke a.
A bụ m Nwa-afọ Nnewi.
Igbo ga-adị hoo!haa!
Previous Post: ENUGWU:IDIDE DỊZỊ NA MMIRI PỌMPỤ
Next Post: AKWỤLA KA ỤMỤ NWANYỊ ANAMBARA NỌ MALESHIYA NA-AGBAZỊ-ASWAM